Antigua neBarbuda Real Estate LOT-AG10
(Citizenship yeAntigua neBarbuda yekutora nzvimbo)
Kutengeswa kwenzvimbo yenyika sechikamu cheimba yekuvakira Villa nekuwana ugari hweAntigua neBarbuda
Yakakomberedzwa nemvura inoyevedza uye makavanda akavanzika, Daniel Bay ndiyo inzvimbo yakanaka yenzvimbo yakasarudzika yegate yemisha mishanu yakashongedzwa.
Varidzi vepamba vachanakidzwa nekuvanzika kwega kwegungwa kuwana uye panoramic maonero emakristaro ebhuruu emvura eWilloughby Bay.
Imba yega yega ichagara hafu yeeka yenyika yepamberi pemahombekombe egungwa uye ichasanganisira angangoita mazana matanhatu emakiromita emakumbo ekugara anonakidza uye emukati nzvimbo, yazvino infinity dziva uye maviri-nhanho ezuva maseki.
Daniel Bay inodada kuvanzika zvachose, kusasarudzika uye kuchengetedzeka, uye ingori pfupi pfupi mota kubva kuChirungu Harbour neNock's Dockyard.
Daniel Bay iri muWilloughby Bay, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwechitsuwa ichi.
Iyo Daniel Bay Hotel yakavakirwa pa3,5 maekare epamusoro emahombekombe epasi ane anotaridzika panoramic maonero ekristaro bhuruu uye turquoise mvura.
Nedzimba shanu chete, kuvandudzwa kweDaniel Bay kunopa kuvanzika, kusarudzika uye chengetedzo kuseri kwemasuwo ayo anogamuchira vaenzi. Imba yega yega ichave neyakavanzika yekuwana yakananga kugungwa, hapana chekufarira padyo.
Iyo Daniel Bay chirongwa ichasanganisira yakavanzika doko, uye mvura yakapoterera yakanaka kumitambo yemvura yakadai semhepo yekufambisa mhepo, kitesurfing uye kayaking.
Mamwe maresitorendi nemabhawa emhando yepamusoro eAntigua angori chinhambwe chipfupi kuenda, munzvimbo yepedyo yenhoroondo yeChirungu neDockyard yaNelson .. Iri zvakare musha kune nzanga yeAntigua inozivikanwa yeyachting.
Daniel Bay iri maminetsi makumi maviri nemashanu kubva kuguta guru reSt.John uye maminetsi makumi matatu kubva panhandare.
Mhedzisiro yekuvanzika uye runako rwakadzikama ndiwo musimboti weiyi yakashata yakaoma
Idzo dzimba dzakagadzirirwa kuve dzichikoka kubva kunze. Imba yega yega, yakakomberedzwa nenzvimbo, ichave nepanoramic maonero emvura dzinopisa dzakatwasuka pamberi payo.
Daniel Bay inotova neyakavanzika marina, uye iyo mvura yakatenderedza yakanakira mitambo yemvura yakadai semhepo yekufambisa mhepo, kitesurfing uye kayaking.
Zvese nzvimbo dzeDaniel Bay zvichatengeswa neyakajairwa villa kuti ienderane nezvaunoda. Mhedzisiro yacho isingaenzaniswi chivakwa iyo iwe yaunogona zvechokwadi kudaidza yako wega chivakwa.
Ndapota taura nesu kana uchida rumwe ruzivo.
0,54 maeka / 23 mativi mita / 659 mativi emamita
Inokodzera zvivakwa zvinotangira kubva pa1000 kusvika ku7000 sq. Tsoka.
Mitengo kubva: $ 725,000 USD
0,59 maeka / 25 mativi mita / 672 mativi emamita
Mitengo kubva: $ 795,000 USD
1 acre / 43 mativi mana / 560 mativi emamita
Inokodzera zvivakwa zvinotangira kubva 2000 kusvika 9000 sq. Tsoka
Mitengo kubva: $ 1,350,000 USD
0,5 maeka / 21780 mativi tsoka / 2023 mativi emamita
Villa Liene: 8800 sqm / 6 yekurara / 8 yekugezera
Yakakura infinity dziva / yepakati mhepo kutonhodza / CCTV / alarm
Mutengo: $ 2.
0,60 maeka / 26350 mativi tsoka / 2448 mativi emamita